“ “ မောင်ရှင့် အဖေ ဘယ်သူလဲဖြေပါ? ” ” | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Creative Writing » “ “ မောင်ရှင့် အဖေ ဘယ်သူလဲဖြေပါ? ” ”
“ “ မောင်ရှင့် အဖေ ဘယ်သူလဲဖြေပါ? ” ”
Posted by ကြောင်လေး on Oct 4, 2011 in Creative Writing, Think Different | 27 comments
ကျန်ခဲ့တဲ့ ၃-၄ နှစ်လောက်က ရွာတစ်ရွာကို တာဝန်တစ်ခုနဲ့ကျွန်တော် သွားခဲ့ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့နယ်ဘက်
ကရေလမ်းကိုပဲအဓိက ထားသွားရတဲ့ပင်လယ်ရေငံ ပိုင်းဒေသပါ။ သိကြတယ်မဟုတ်လား
ရေငံကိုဘယ်သူပိုင်တယ်ဆိုတာ။ ကျွန်တော်သွားမဲ့ရွာကို စက်လှေ သုံး နာရီလောက်စီးရတာဆိုတော့
လမ်းမှာပျင်းနေမှာစိုးတာနဲ့ မြို့ပေါ်က သူငယ်ချင်း (၃)ယောက်ကိုခေါ်ပြီးစက်လှေအော်ဒါငှားပြီးသွားတာပါ။
စက်လှေတစ်စီးလုံး လူလေးယောက်ပဲဆိုတော့ ပလောင်ထင်းသွားကြတာပါ..ဟဲဟဲ။ မနက် ၁၀ နာရီလောက်က
ထွက်သွားတာ နေ့လည် ၁ ချက်ထိုးလောက် ရောက်သွားပါတယ်။ ရွာမရောက်ခင် စက်လှေပေါ်မှာ ၁၁း၃၀
၀ိုင်းမစခင် သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်က ဖန်ခွက်ထဲကို အရက်နဲနဲထည့်၊ လှေဦးကိုသွားပြီး ပါးစပ်က ပွစွ ပွစွနဲ့
ရွတ်ဖတ် ပြီးနောက် အရက်ကိုမြစ်ထဲသွန်ချလိုက်ပါတယ်။ သူတို့ဒေသရဲ့အစဉ်အလာဖြစ်မှာပဲဆိုပြီး
ကျွန်လည်းဘာမှ မပြောပါဘူး။ ရွာရောက်တော့ ဥက္ကဌနဲ့ ရပ်မိရပ်ဖ ၃ ယောက်ဆင်းပြီးကြိုဆိုကြပါတယ်။
သူတို့ရွာလေးရဲ့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မဲ့ကိစ္စဆိုတော့ ဖော်ဖော်ရွေရွေပြာပြာသလဲပါဘဲ။ ကျွန်တော်တို့က
ကြိုတင်အကြောင်းကြားထားတာပါ။ စက်လှေခကိုလည်း သူတို့ရွာရံပုံငွေနဲ့အကုန်အကျခံတာပါ။
လုပ်ငန်းအတွက်ရွာထဲကို လှည့်ပတ်ကြည့်ရှုပြီးတော့ ရွာရဲ့ တစ်ဆိုင်တည်းသော အကောင်းဆုံး
စားသောက်ဆိုင်ကိုခေါ်သွားပါတယ်။ တရုပ်စာအကြော်အလှော်၊အရက် နဲ့မြန်မာပုလင်းဘီယာပုလင်း၊
ဗူးတွေရပါတယ်။ အစားအသောက်တွေကိုသူတို့ကြိုမှာထားပါတယ်။ ဘီယာပုလင်းတွေဆွဲကြပါ တယ်။
ကျွန်တော်တို့ဘေးဝိုင်းမှာ ရွာသား သုံးယောက်လည်းသောက်နေပါတယ်။
နဲနဲတော့ ရေချိန်ကိုက်နေကြတဲ့ပုံပါပဲ။ သူတို့ဆွေးနွေးနေကြတာက ရေငံပိုင်ဦးရှင်ကြီးအကြောင်းပါ။
စာအုပ်တွေထဲ၊ တိပ်ခွေဇာတ်လမ်းတွေထဲမှာ တွေ့ရတာ ဦးရှင်ကြီးဟာ အမေမုဆိုးမနဲ့ နေရပြီး သမီးလှကျွန်းကို
ထင်းခုတ်လိုက်သွားရင်း စောင်းတီးတဲ့အကြောင်း၊ဥစ္စာစောင့်မလေးတွေက စောင်းသံ သဘောကိုသဘောကျလို့
စက်လှေကိုဆွဲထားတဲ့ အကြောင်း၊လှေသူကြီးအစီအစဉ်နဲ့မဲနှိုက်တော့မှ မောင်ရှင်မဲပေါက်လို့ ရေထဲ ပစ်ချခံရတဲ့
ဦးရှင်ကြီးဟာရေငံတရိုးကိုအပိုင်စိုးရထားတဲ့အကြောင်း၊ဒါပေမဲ့သူဟာ ရောင့်ရဲ တင်းတိမ်နိုင်မှုမရှိကြောင်း၊
လောဘကြီးပြီးနယ်ချဲ့တဲ့အကြောင်း၊ အခုဆိုရင် ရေငံမဟုတ်တဲ့ ဟိုးအထက်အညာအထိ ရောက်နေကြောင်း၊
၀ါဝင် ၀ါထွက် သူ့ကိုပင့်ဖိတ်ပြီးပသနေရကြောင်း၊ သူကလည်းအဲ့ဒီနေရာတွေကိုရောက်အောင်သွားပြီး
ပသခံနေကြောင်း၊ နောက်ပြီး သူပိုင်တဲ့ရေထဲ ကမိကျောင်းကိုစီးတော်ယာဉ်အဖြစ် အပိုင်စီးထားတဲ့အပြင်
ဟိုးအထက် ပဲခူးရိုးမ တောတွင်းအထဲက ကျားကိုပါ အလွတ်မပေးပဲ ဆွဲရှင်းထားကြောင်း
အဖော်လိုက်လာတဲ့သူငယ်ချင်းက ခုံအောက်ကနေ ခြေထောက်ကို ခြေထောက်နဲ့ကုတ်ပြီးအချက်ပြလို့
သတိထားကြည့်လိုက်တော့ ခုနက ရွတ်ဖတ်တဲ့ သူငယ်ချင်းကတော့ တော်တော်မျက်နှာပျက်နေတာ
တွေ့လိုက်ရပါတယ်။ ရွာသားတွေပြန်ရှင်းပြတာက ဦးရှင်ကြီးလောဘကြီးလို့အထက်အညာရောက်သွားတာ
မဟုတ်ကြောင်း၊ နတ်ဆိုတာ အုပ်ချုပ်သူမင်းကိုကြောက်ရကြောင်း၊ မင်းမိန့်နှင့် နှင်လျှင် ဆက်မနေနိုင်ပဲ
ပြေးရကြောင်း၊ အခုရေငံပိုင်းလုပ်ကွက်တွေကို တပ်တွေက သိမ်းပိုက်ထားကြောင်း၊
တပ်အသီးသီးနဲ့ဌာနအချို့ ရဲ့သက်သာလုပ်ငန်းအဖြစ်လိုင်စင်ယူထားပြီး ဒေသခံရေလုပ်သားတွေက
သူတို့လုပ်တဲ့ ပိုက်အမျိုးအစား အရေအတွက်အလိုက်၊ တပ်တွေနဲ့ ဌာန ကိုယ်စားလှယ်တွေကို
လစဉ်ကြေးပြန်ပေးဆောင်ပြီးငါးဖမ်းကြရတာပါ။ ကျွန်တော်တို့ ၀န်ထမ်းသက်သာလုပ်ငန်းတွေ
ခေတ်စားတဲ့အချိန်ကပေါ့၊ ပြောနေတဲ့ရွာသား ၃ ယောက်ဟာ ရေလုပ်သားတွေပါ။) ရေချိုရေငံ စပ်မှာသာ
မိချောင်းတွေ ပေါပေါများများနေနိုင်ကြောင်း၊ ရေချိုတွင် မိချောင်းရှားသည့်အတွက် လည်းကောင်း၊
အောက်အရပ်ဒေသဟာရေလမ်းခရီးများပြီး မိချောင်းနှင့်သွားလို့အဆင်ပြေနိုင်ပေမဲ့ အထက်အညာဒေသဟာ
အခက်အခဲမရှိစေရန် ကျားကိုအပိုင်စီးရ တာဖြစ်ကြောင်းရှင်းပြကြပါတယ်။
ထူးခြားတာက အဲဒီမောင်ရှင် ဇာတ်လမ်းမှာ အမေမုဆိုးမ နဲ့ နေရတာကစပါပြီး အဖေအကြောင်းမပါဘူးလို့
ပြောနေကြတာပါ၊ အဲဒါကိုကျွန်တော်လည်းသေချာသတိမထားမိပါဘူး။ သူတို့ဆက်ပြောနေတာက
မောင်ရှင်ကို သူ့အမေက အဖေ မရှိပဲမွေးခဲ့ကြောင်း အခုဆွမ်းတင်နေတဲ့သူတွေဟာ အဖေမရှိတဲ့
အစိမ်းသရဲကို နတ်အဖြစ်သတ်မှတ်ပြီး ကန်တော့နေတဲ့အကြောင်း၊ ဆွမ်းတင်စားတဲ့ ဆရာတွေ ကလည်း
ကျွန်တော်လည်း ကိုယ့်စာပွဲဝိုင်းကနေ သူတို့ပြောတာကို “ အင်း ”လိုက်လုပ်နေရတာပေါ့။
အဲဒီအချိန်မှာ ဥက္ကဌက ရေလမ်းနဲ့ပြန်ရမဲ့ ကျွန်တော်တို့ကို အမှားတွေပြောမိမှာ စိုးရိမ်တယ်ထင်ပါတယ်။
ပြောနေတဲ့ ရွာသားသုံးယောက်ကိုလှမ်းပြီးတော့ “ကဲကဲ မင်းတို့တွေ ပြန်ကြတော့၊ ငါမနက်ဖြန်ခါ ကြတော့မှ
ဆွမ်းတင်ဆရာတွေကို ဦးရှင်ကြီးအဖေနာမည် မသိရင် စုံစမ်းထားကြ ဖို့ နဲ့ အဖေနာမည် မသိတဲ့
ဆွမ်းတင်ဆရာကို ဆွမ်းခွင့်မပေးတော့ဘူး ဆိုပြီးအမိန့်ထုတ်လိုက်မယ်။ သွားကြတော့” ဆိုပြီးပြောလွှတ်
လိုက်ပါတယ်။ ရွာသားသုံးယောက်လည်းဟုတ်ကဲ့ ဆိုပြီး ငွေရှင်းပြီးတော့ထွက်သွားပါတယ်။ ကျွန်တော်လည်း
မောင်ရှင်အဖေအကြောင်း သူတို့နဲ့ဆက်ပြီးမဆွေးနွေးလိုက်ရပါဘူး။ ကျွန်တော် သိချင်တာက မောင်ရှင် ရဲ့
ဘိုင်အိုဂရပ်ဖီထဲမှာအဖေအကြောင်းတကယ်မပါတာလား၊ မောင်ရှင်အဖေဘယ်သူလဲ သိတဲ့သူများရှိရင်
ကျွန်တော့ကိုပြောကြပါ။ နောက်ပြီး မောင်ရှင် (အခုတော့ဦးရှင်ကြီးလို့ခေါ်နေကြပါပြီ) ဟာ ဘယ်နှစ်ကိုယ်
ပွားနိုင်မလဲ၊ အထက်အညာနဲ့အောက်အရပ်ကို မိချောင်းတလှည့် ကျားတလှည့်စီးပြီးဘယ်လောက်မြန်မြန်
ခရီးသွားနိုင်ပါသလဲ၊ မနက်လေးနာရီနဲ့ ခြောက်နာရီ ကြားတစ်ကြိမ်၊ညနေ ငါးနာရီနဲ့ ည ရှစ် နာရီ ကြားတစ်ကြိမ်
အတွင်း အထက်အရပ်၊ အောက် အရပ် မြို့များစွာ၊ နေရာများစွာက ဆွမ်းတင်ဆရာတွေရဲ့ ပင့်ဖိတ်မှုကို
ဘယ်နည်းဘယ်ပုံနဲ့လှည့်လည် အပူဇော်ခံနေပါသလဲ ရှင်းလင်းပြောပြကြပါခင်ဗျာ။ ။
ဘယ်သူ့ကိုမှ ပုတ်ခတ်စော်ကားခြင်းမဟုတ်ပါဘူး၊ သိချင်တာနဲ့ ကတ်သီးကတ်သပ် တွေးကြည့်ရုံပါပဲ။
အင်း မောင်ရှင့် အဖေက နန်းရှင်မဟုတ်တာတော့ သေချာတယ်ဗျာ.။ဟီး….ဟီး။
ဖြေတော့ဖြေပေးချင်းပါတယ်…….။ကျနော်လည်း ခင်ဗျားလောက်မသိလေတော့ နောက်ဖြေပဲ ဖြေလိုက်ပါ
တယ်။ချိတ်ချိုးနဲ့နော်……..။စဉ်းစားရတာ တစ်ယောက်စာတော့ သက်သာကောင်းစေရဲ့ဆိုတဲ့ စေတနာ
ဘာပဲပြောပြော lone တို့ကတော့ ဦးရှင်ကြီးတင်လို့ ကျွေးတဲ့မုန့်ဆန်းတော့ အရမ်းကြိုက်တယ်… ….
သူ့အယူအဆနဲ့သူ သူ့ဓလေ့နဲ့သူပေါ့… မကိုးကွယ်ပေမယ့် မစော်ကားမိစေနဲ့ပေါ့… ကိုယ်ကိုယ်တိုင်လည်း
ဘုရားကလွဲပြီး ဘာမှမကိုးကွယ်ဘူး… ကိုယ်မမြင်နိုင်တဲ့ အရာတွေက အများကြီး ရှိသေးတယ်လေ… …
လူကိုယ်တိုင်တောင်မှ ကိုယ့်ကိုစော်ကားရင်အမျက်ထွက်ကြသေးတာပဲ… နတ်တွေကလည်း သူတို့ကို စော်ကားရင်… ဘယ်သူမှပြုံးပြီး ငြိမ်ခံနေကြမှာမဟုတ်ဘူး…သူတို့တတ်စွမ်းသလောက်နဲ့ ကိုယ့်ကို
ပညာပြန်ပြကြမှာပဲ… ကိုယ်ကံမြင့်နေတဲ့အချိန်ဆိုရင်မထိရောက်ပေမယ့် … ကံနိမ့်တဲ့အခါနဲ့ကြုံရင် ကိုယ့်ကို
ဒုက္ခပြန်ပေးနိုင်တာပဲ… အဲဒါကြောင့် မယုံကြည် မကိုးကွယ် ရင်နေ…မစော်ကားမိစေနဲ့…ပေါ့……
ဦးကြောင်ကြီးကတော့ မုန့်လုံးရေပေါ် သိပ်ကြိုက်တယ်။ ကန်နိမ့်နေမှာဆိုးရင် ကမ်းခြေမှာ သွားကူးရအောင်လေ..။ ရေမကူးတတ်ရင် ဦးကြောင်သင်ပေးမယ်……။ :cool:
ဦးကြောင်ကြီး က lone ကိုတွေ့တာနဲ့နောက်မယ်ဆိုတာ ချည်းပဲ… lone ကတော့ ကြောင်ဆိုသိပ်မုန်းတာ အိမ်မှာတောင်မမွေးဘူး… ခွေးဆိုရင်တော့ နဲနဲချစ်တယ်… ကြောင်ချီးကနံတယ်…. သခင်အပေါ်လည်း သစ္စာမရှိဘူး…..
ဟုတ်ပါတယ်မလုံးရေ။သူတို့က ကောင်းကျိုးမပေးနိုင်ပေမဲ့ ဆိုးကျိဲးကိုတော့ပေးနိုင်ကြတယ်လို့
ကြားဖူးပါတယ်၊ဒါကြောင့်သူတို့ကို ကျွေးမွေးလှူဒါန်းမှုပြုပြီး ကိုယ့်ကိုဒုက္ခမပေးအောင်
ပေါင်းကြရတာပါ။ ဒါကိုပသတယ်လို့သုံးကြပါတယ်။ ဒါကိုမှန်းမသိဘဲ အရမ်းယုံလွယ်ပြီး ပူဇော်ပသတယ်လို့တွဲပြီးခေါ်ဝေါ်လာတယ်၊ ဒီကတဆင့်တက်ပြီးကိုးကွယ်တယ်
ဆိုတဲ့အသုံးအနှုန်းအထိ တက်လာဟန်တူပါတယ်။ ဆရာတော်ကြီးတွေကတော့ ဒီဝေမာနိက
ပြိတ္တာ ဘုံသားတွေဟာ ကိုးကွယ်ရမည့်အထဲမပါ ပါ။ ကျွေးမွေးလှူဒါန်းပြီး မေတ္တာပို့ အမျှအတန်း
အတင်းသွားရောပြီးရင် သူ့အလိုလိုက်နေတုန်း တော့ကောင်နေပါတယ်။အလိုမပြည့်ရင်ဒုက္ခပေး
တတ်ပါတယ်။ ကျွန်တော်ကတော့ မစော်လည်းမစော်ကားပါ ၊ပေါင်းလည်းမပေါင်းပါခင်ဗျာ။
အစားခံနေကြတယ် မောင့်ရှင့်အဖေကတော့ မောင်ရှင့်အမေရဲ့လင်ပေါ့ကွယ်
ဒုရဲမှူး ကိုကြောင်လေးတို့ များ ဘယ်သွားသွား ဘယ်လာလာ ပြုစုမယ့်သူတွေကတော့ နေရာတိုင်းမှာ အသင့်…..
ဦးရှင်ကြီးအဖေ ဘယ်သူလဲဆိုတာ လ.ဝ.က ကို မေးကြည့်ပါလား.. အမှုအတွက်အရေးတကြီးလိုအပ်နေရင်တော့ ရွာထဲက CIA သူလျှို Senior ကိုကြောင်ကြီးကို အကူအညီတောင်းပေတော့ဗျို့ …
ကျုပ် လဲ မသိဘူး ကိုကြောင်လေး
နို့ ..ကိုကြောင်လေး စာ ကို ဖတ်ပြီး
ကွမ်းတစ်ယာညက် ခန့် အချိန်တွင်
မောင်ရှင့် အဖေ ဟာ
လူယောက်ျား စစ်စစ် တစ်ဦးဦး ဖြစ်မှာ
ရေချို + ရေဖန် = ရေငန်
ဦးရှင်ကြီးသည် လူ့ဘ၀တွင် အမေဖြစ်သူ ဒေါ်ဖန် နှင့်နေပြီး နတ်ဘ၀တွင် ရေချိုအရပ်တွင်ရောက်
နေသော ဦးချိုကြီးထံတွင် နေထိုင်ခြင်းဖြစ်ပါသည်။
တစ်ကယ်တော့ မောင်ရှင်ဆိုတာက သူ့ရဲ့ငယ်နာမည်မဟုတ်ပါဘူး ၊ ငယ်နာမည်က နာဒဇွန်ပေါင် ဖြစ်ပါတယ်။ သူက မွန်လူမျိုးဖြစ်ပါတယ်။ ပဲခူးမြို့ကဇင်းရွာ နေ အဘ ဦး ဘထွား၊ အမိဒေါ် ဖြူ တို့ရဲ့ တစ်ဦး
တည်းသောသားဖြစ်ပါတယ်။ ဖခင်ကွယ်လွန်တဲ့အခါမှာ ပဲခူကိုစွန့်ပြီး ဒလ ကိုသားအမိ နှစ်ယောက်ပြောင်းလာခဲ့ကြတယ်။ သူဟာ အမေကို သစ်ခုတ် လုပ်ကျွေးတယ်။ ကျန်တာကတော့ smallcat
မောင်ရှင်ရဲ့ အဖေ ဘာကြောင့်သေရတယ်၊ ဘယ်လိုသေ တယ်ဆိုတာကိုတော့ ကျွန်တော်လည်း မသိပါဘူး
ကျွန်တော်တောင်မသိဘူးဗျ ။အစ်ကို ဘယ်လိုရှာဖွေတွေ့ရှိပါလိမ့် ကျွန်တော်လည်းလေ့လာချင်
လို့ တစ်ချက်လောက်ပြောပြပါ့လားဗျ ။ စာအုပ်ဆိုလည်း နာမည်ပေါ့ ။
မှတ်သားသွားပါတယ် ကန္ဒားစီး ကိုချစ်ရင်ထူးခင်ဗျား….
ဟာဗျာ အဲဒီလိုကြီးမပြောလိုက်ပါနဲ့။ ကျွန်တော်က သိစေချင်လို့ ပြောပြပေးတာပါ။ ကျွန်တော်အပင်ပန်းခံပြီး လေ့လာထားသမျှကို ဗဟုသုတ အနေနဲ့ တင်ပြပေးတာပါ။ အဲဒီလိုကြီးတော့ မပြောစေချင်ပါဘူး (ဖြစ်နိုင်မယ်ဆိုရင်ပါ) ။ တစ်ကယ့်တစ်ကယ် ပြောမယ့်ပြောတော့လည်း တခြားသူမှမဟုတ်ဘဲကိုး ။ မှော်ဆရာ ရယ်။ ပြောရက်လိုက်တာဗျာ။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်နော်။ ကျွန်တော့်မှာ အမှားရှိနေရင်လည်း သွန်သင်ပါ ၊ ဆုံးမပါ ခင်ဗျာ။
နောက်တာပါ ကန္နားစီး၇ယ် စိတ်မဆိုးပါနဲ့ …
အခုခေတ်မှာ သူတို့က ခုခေတ်မှာ ထိပ်ဗျ …
မှော်ဆရာတောင် လိုင်းပြောင်းရင် ကောင်းမလား စဉ်းစားနေရတာ
အမေဂျမ်း နဲ့ မနှဲလေး ကို သေချာ မခွဲတတ်သေးလို့
မှော်ဆရာကလည်း မနောက်ပါနဲ့ဗျာ ၊ မနှဲလေးက အပြင်(၃၇)မင်းကနတ်၊ အမေဂျမ်း ကရိုးရာ နတ်လေ။ မနှဲလေးက အေဒီ(၄)ရာစုမှာပေါ်လာခဲ့တာပါ။ ကလေးနတ်ဖြစ်ပေမယ့် စီးပွါးရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်း မ,စတယ်လို့သိရပါတယ်။မြင်းခြံမြို့နယ် ဆီးမီးခုံကျေးရွာမှာ တပေါင်းလပြည့်ကျော်(၇)ရက် က(၁၁)ရက်အထိကျင်းပပါတယ်။ အပြင်(၃၇)နတ်စာရင်းမှာ နောက်ဆုံးနတ်ဖြစ်ပါတယ်။
အမေဂျမ်းကတော့နာမည်အရင်က မချမ်းသာ ဖြစ်ပါတယ်။ သူ့ကိုလည်း စီးပွါးတက်အောင် အတွက်ကိုးကွယ်တာပါ။ ညီအစ်မ (၃)ယောက်အနက်မှ အလတ်ဖြစ်ပါတယ်။သူခိုးကြီး ငတက်ပြား( ကိုတက်ခါး) နဲ့တောင်ချစ်ကြိုက်ခဲ့တယ်လို့ မှတ်သားရပါတယ်။ ကိုတက်ခါးကထန်းရည်ကို အလွန်ကြိုက်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် သူ့ချစ်သူ ဖြစ်တဲ့ မချမ်းသာက ထန်းရည်ရှာပေးရပါတယ်။ ဒါနဲ့သူမလည်း ထန်းရည်ကြိုက်သွားပါတယ်။ထန်းရည်မူးလာတဲ့အခါမှာ အာကြမ်း၊ လျှာကြမ်းဖြစ်လာတတ်တဲ့အတွက် မဂျမ်း(အမေဂျမ်း) လို့နာမည်တွင်လာတာပါ။ တံတားဦးမြို့နယ်၊ အေးကြည်ကုန်းရွာမှာရှိတယ်။ တောင်ကုန်း(၃)ခုရဲ့မြောက်ဖက်အစွန်ဆုံးတောင်ကုန်းပေါ်မှာ အမေဂျမ်း နတ်ဂူရှိပါတယ်။နွားသူခိုးတို့ရဲ့အားထားရာနတ်ဖြစ်တယ်။ စားတော်ဆက်ရာမှာ ထန်းရည်ကအဓိက ဖြစ်တယ်။ပြောင်းဖူးဖက်ဆေးလိပ်နဲ့ ဆီ၊ ဆား သာပါတဲ့လက်ဖက်နဲ့ တင်ကြတယ်။ နယုန်လပြည့်ကျော် (၁၃)ရက်မှာ ရေချိုးပြီး၊ (၁၄) ရက်နေ့မှာတောင်တက်ပွဲ ချော့ပွဲများပြုလုပ်ကာ စည်ကားစွာကျင်းပတဲ့နတ်ပွဲတစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်။
သူက ရန်ကုန်းတိုင်း ဒလကနေ ဧရာဝတီတိုင်း ဘိုကလေးမြိုနယ်ထဲက ကျွန်းညိုအထိကို
ကျွန်တော်တာဝန်နဲ့ ဘိုကလေးမြို့နယ်ထဲက ဆက်ဆန်းဆိုတဲ့ရွာကိုသွားတော့ကျွန်းညိုကိုဖြတ်ရတယ်။
အဲဒီခရီးမှာမြစ်သုံးခုဆုံတဲ့နေရာရောက်တော့ ပဲ့ထောင်မောင်းတဲ့သူ က ကျွန်းပေါ်တက်ပြီးနတ်နန်းတစ်ခုကို
ကန်တော့ပါတယ်။ အဲဒါဦးရှင်ကြီးနတ်ကွန်း ၊မောင်ရှင်သစ်ခုတ်လိုက်ရင်းစောင်းတီးတဲ့နေရာပါတဲ့။
ဒေသခံမဟူတ်တဲ့ စက်လှေသမားတွေဟာ ဒီနေရာမှာအမြဲဝင်ပြီးကန်တော့ရပါတယ်တဲ့။ေ
ရကျနေချိန်ဆိုရင် လတာပြင်ထဲမှာေ လှဝမ်းဗိုက်အရာ စွပ်ကြောင်းကြိးကိုအခုထိတွေ့နိုင်တယ်လို့
ကျွန်တော်တို့သွားတုန်းကရေတက်ချိန်မို့ မမြင်တွေ့ခဲ့ရပါ။ကျွန်တော်သွားတာ ၁၉၉၅ လောက်ကပါ။ တာဝန်နဲ့ဖြတ်သွားဖြတ်လာပါ။ ရွာထဲမှာ ဘိုကလေးဘက်ကသူရှိရင် ဒီအကြောင်းလေးတိတိကျကျဆွေးနွေးပေးပါလို့တောင်းဆိုပါတယ်ခင်ဗျာ။
ကျွန်းညိုမှာ ဦးရှင်ကြီးနတ်နန်းရှိမှန်း စမောကတ်ပြောမှ သိတော့တယ်။ ကျွန်မဖြင့်ဘိုကလေးမှာ ၁နှစ်ခွဲလောက်နေပီး အလုပ်သိမ်းမှ မိန်းမလှကျွန်းပေါ်ရောက်ဖူးတာ။ အဲဒိမှာလဲ ဦးရှင်ကြီးနတ်နန်းရှိတာဘဲ။ အနီးအနားကရွာတွေကို အလုပ်ကိတ်စနဲ့ရောက်ပေမဲ့ နတ်ကိတ်စတော့ တခါမှမမေးဖူးဘူး။
ရွှေအိရေ အဲဒီဒေသမှာလက်ရှိတာဝန်ထမ်းဆောင်နေဆဲဆိုရင် ဒေသခံတွေကိုသေချာမေး
ကြည့်ပါဦး။ အချိန်လေးယူပြီးတော့ တိတိကျကျလေးသိအောင်လေ့လာပါလား၊အလုပ်မရှိ ဘုန်းကြီးခေါင်းသန်းရှာပေါ့၊ (ကန်တော့ကန်တော့)
ရေငံပိုင်းဖြစ်တော့ ကျွန်းတိုင်းမှာ ဦးရှင်ကြီးနတ် ကွန်းတွေထားတာလဲဖြစ်နိုင်တယ်။
လှေစွပ်ကြောင်းကိစ္စက စက်လှေသမားတွေ ချဲ့ကားပြောတာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်၊
ကျွန်တော်သိထားတာက မောင်ရှင်ဟာ မိန်းမလှကျွန်းမှာသစ်သွားခုတ်တယ်လို့သိထားတာ။
အဲဒီဒေသကိုကျွန်တော်သိပ်မကျွမ်းကျင်ပါဘူး၊မိန်းမလှကျွန်းနဲ့ ကျွန်းညိုဟာ မတူဘူးဆိုရင်
small cat ကောစောင်းတီးခဲ့သေးသလား၊ တီးခဲ့မိရင် မြန်မြန်တောင်းပန်လိုက်(ရုံ တာ /မရုံတာအသာထား)
သင့် ba gyi …….
မောင်ရှင့် အဖေ မောင်တုတ်ကြီးတော့ မဟုတ်ရပါဗျာ။အရက်သောက်သေ၊သူများသတ်လို့ သေတဲ့ သူတွေကို ဂရုစိုက်အလေးထားနေတာတော့
တစ်ကယ်တော့ ကျွန်တော်ရေးလိုက်တာက သိပ်မပြည့်စုံသေးပါဘူး ။ကျွန်တော်က “နတ်အကြောင်း သိကောင်းဖွယ်ရာ” ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့ Post တစ်ခုရေးနေပါတယ်။ အဲဒီမှာ မောင်ရှင်ရဲ့အကြောင်းကို ပိုပြီးတော့ တိတိကျကျ ရေးသားပေးပါ့မယ်။ ကျွန်တော်သိရသလောက်ကတော့ မောင်ရှင်ရဲ့အဖေ ဦးဘထွား က မွန်နာမည် နာဋိတ်တော် ၊ ဖြစ်ပြီး သူ့ရဲ့မိခင် ဒေါ်ဖြူကတော့ မိသုကညာ ဖြစ်ကြတယ်လို့မှတ်သားရပါတယ်။ အစ်ကိုတို့ သူ့ထက်ပိုပြီးတော့ သိချင်ရင် ကျွန်တော်က ဦးရှင်ကြီးတင်ပုံ တင်နည်း ကိုပါရေးပေးလို့ ရပါတယ်။ စာအုပ်ကိုညွန်းပါဆိုရင်တော့ “မြန်မာနိုင်ငံနတ်ကိုးကွယ်မှုသမိုင်း ” ဆိုတဲ့ စာအုပ်မှာလည်း လေ့လာနိုင်ပါတယ် ခင်ဗျာ။
ဦးရှင်ကြီး အဖေက မောင်ရင်မောင် ဖြစ်ပြီး အမေက မမယ်မ ဖြစ်ပါတယ်
ထားဝယ်ရေနက်ဆိပ်ကမ်း၊ ကျောက်ဖြူရေနက်ဆိပ်ကမ်း များတွင် အလုပ်အကိုင်လုပ်ကွက်လိုခြင်သူများ ဦးရှင်ကြီးနဲ့ဆက်သွယ်ပါ။